India oo qorshaynaysa inay 18 safaaradood ka furato Afrika, sida uu sheegay ra’iisul wasaaraha dalka Narendra Modi. | Biyoguurenews.com
Home Wararka India oo qorshaynaysa inay 18 safaaradood ka furato Afrika, sida uu sheegay...
India oo qorshaynaysa inay 18 safaaradood ka furato Afrika, sida uu sheegay ra’iisul wasaaraha dalka Narendra Modi.
Hadalkaas ayuu Mr Modi ku soo qaaday khudbad uu u jeedinayey baarlamaanka Uganda, waana markii ugu horreysay ee uu baarlamaanka dalkaas la hadlo ra’iisul wasaare Hindi ah oo xilka haya.
Wuxuu soo dhaweeyey siyaasadda madaxweyne Yoweri Museveni ee ah in dadka Aasiyaanka ah ee Uganda u dhashay ay dib u soo noqdaan, ka dib markii dalka laga cayriyey tiro badan oo dadkaas ka mid ah xilligii uu xukunka hayey Idi Amin, sannadihii 1970 meeyadii.
“Dadkeenna waxaa ka mid ah qaar badan oo isku xiraya Uganda iyo India” ayuu Mr Modi yiri.
“Hogaamintaada aragtida leh ayaa ka caawisay dad reer Uganda ah oo asalkoodu yahay Hindi inay dib u laabtaan oo dalkooda dhistaan” ayuu ku yiri Mr Museveni.
India waxay sare u qaadi doontaa maalgashigeeda Afrika, waxayna suuqyadeedu u furnaan doonaan dalalka Afrika “si loogu fududeeyo, loona soo jiito inay ganacsi la yeeshaan India” ayuu yiri Mr Modi.
Wuxuu intaa ku daray in 6000 oo Hindi ah ay ka shaqeyaan hawlaha nabad ilaalinta Qaramada midoobay ay ka waddo Afrika. In ka badan 160 nabad ilaaliye ayaa naftood ku waayey ayagoo hawlahooda gudanaya, waana tiradii ugu badnayd ee dal mar qura uga dhimata hawlgal nabad ilaalineed, sida uu sheegayo Mr Modi.
India way idiin shaqayn doontaa, wayna idinla shaqayn doontaa; waxaan idinku dhinac taagannahay hammigiinna. Waan idiin hadlaynaa waana wada hadlaynaa” ayuu ku daray Mr Modi.
Wuxuu sheegay in seddex meelood oo laba dadka India iyo Uganda ay dad’doodu ka yar tahay 35 sano, “haddii mustaqbalka uu dhallinyaradaas faa’iido u leeyahayna waxaa iminka la joogaa wakhtigii la dhisi lahaa” ayuu yiri.
Mr Modi wuxuu kaloo daboolka ka qaaday qorshe lagu dhisayo xarun dhaqan, taasoo loogu magac daray ninkii ololaha u galay ka hor tagga gumaysiga ee India, Mahatma Gandhi, waxaana laga dhisi doonaa magaalada Uganda ku taalla ee Jinja oo ah halka uu ka soo billowdo wabiga Niil.
Previous articleMadaxweynaha Maraykanka ayaa la duubay isaga oo lacag kula gorgortamaya haweenay uu la seexday
Next articleMaareeyihii biyo xireenka Abay ee dalka Itoobiya oo isaga oo mayd ah la helay
BERBERA Musraixiinta cabdirashiid Berberata iyo Cabdilahi xuseen ayaa furtay 40 xafiis oo Olallah
Maraykanka oo xabbad joojin ku baaqay hubna ka iibinaya Israel
Sheekh Masar u dhashay oo ku baaqay in la sameeyo ciidan Muslimiintu leeyihiin
BERBERA Musraixiinta cabdirashiid Berberata iyo Cabdilahi xuseen ayaa...
Sheekh Masar u dhashay oo ku baaqay in la sameeyo ciidan...
Abiy oo sheegay in dalkiisa ay fara galin ku hayaan quwado...
Wafti Miisaanleh oo Jabuuti usoo dirtay ka qaybgalka 18 may; madaxwaynahayaga...
Warbixin Xaqiiqa ah oo BBc ka Diyaarisay Caruurta Afkooda Hooyo ...
Gudida Doorashada Ethiopia oo dib u dhigay doorashii mudaysnayd, sababtana way...
BERBERA ,DHAGAX DHIGA MASHRUUCA BATALAALE
Hab Maamuuskii U Madaxwayne Biixi Kaga Qayb Galay Xafladda Caleemo Saarka...
Ismaaciil Cumar Geelle oo markii 5aad xilka madaxtinimada Jbuuti loo dhaariyay
Dawladda Qadar Oo Madaxweyne Biixi Ka Dalbatay Inay Door Ku Yeelato...
Sheekhul baladk Boorame oo duray masuuliyiin dawlada ah
BERBERA ,Warka Munaasibada Tukashada salada ciida